सरकारले आफूभित्रको अन्तरविरोधलाई चिरेर समृद्धिको सपना पूरा गरोस् - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा प्रष्ट वक्ताका रुपमा परिचित छन् । अहिले नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका शर्मासँग मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, नेपाली कांग्रेसको भूमिका, युवाको योगदान, वर्तमान सरकारले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलगायतका बारेमा केन्द्रित भएर मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी–
अपेक्षाकृत त्यति राम्रो चुनावी परिणाम हात पार्न नसकेको नेपाली कांग्रेस अहिले कुन रणनीतिसहित अघि बढेको छ ?
यो महानिर्वाचन सम्पन्न गरेपछि नेपाली कांग्रेस एकातिर गौरवको र अर्कोतिर गम्भीरताको दोसाँधमा उभिएको छ । गौरव यस अर्थमा छ कि नेपाली कांग्रेसको नायकत्वमा, नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीको अगुवाइमा नेपालमा संविधान कार्यान्वयन भएको छ । कांग्रेसकै नेतृत्वमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । यो काम सम्पन्न गर्न सकेकोमा कांग्रेसभित्र गौरवको अनुभूति भएको छ । अर्कोतिर कांग्रेसले यस्तो गौरव गर्दागर्दै किन हा¥यो ? हाम्रो अगुवाइले जित्ने, यत्रो अभिभारा पूरा कांग्रेसकै नेतृत्वमा पूरा हुने अनि हामीले चाहिँ किन हार्ने ? यो गम्भीरता पनि हाम्रासामु छन् । हामी अहिले यही दोसाँधलाई कसरी हल गरेर जान सकिन्छ भनेर छलफल र सल्लाह गर्दै अघि बढेका छौं ।
निकै लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको, लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको पार्टी अहिले सत्ता बाहिर बसेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । यसलाई चाहिं कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
नेपाली कांग्रेसको उमेर ६५–६६ वर्ष पुग्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस करिब ५० वर्ष सत्ता भन्दा बाहिर बस्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सुरुवाती चरणदेखि अहिलेसम्मको हिसाब गर्दा पनि नेपाली कांग्रेस बढीमा त्यही करिब १५ वर्ष सत्तामा बस्यो होला । यसरी हेर्दा नेपाली कांग्रेसलाई सत्तामा बसेको भन्दा सत्ता बाहिर बसेको धेरै ठूलो अनुभव छ । जेलमा, प्रवासमा, जंगलमा रहेको बढी अनुभव कांग्रेससँग छ । त्यसैले अहिले कांग्रेस सत्ता बाहिर बस्दा सबै सकियो भन्ने पक्षमा छैन । हामी अहिले बाहिर बस्दा झन् जिम्मेवारीसहित बसेको छौं । लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउनका लागि सत्ता पक्षको भन्दा प्रतिपक्षको भूमिका बलियो रहने भएकाले पनि हामी थप जिम्मेवार भूमिकासहित बाहिर छौं । परिपक्व र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकासहित बाहिर छौं । हामी बाहिर बसेर पनि परिपक्वता र जिम्मेवार भूमिकालाई भुल्ने छैनौं ।
निकै उतारचढावपूर्ण राजनीतिकबाट यहासम्म आएको नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ । समृद्ध नेपाल निर्माणमा पनि त यो पार्टीको सकारात्मक भूमिका आवश्यक होला नि ?
राम्रा काम सरकारले गर्दै गयो भने त्यो कामलाई हामी सकारात्मक तथा रचनात्मक ढंगले सहयोग गर्नेछौं । नेपाली कांग्रेस संसद्मा विनम्र तर बुलन्द ढंगले प्रस्तुत हुन्छ । नराम्रा काम सत्ता पक्षले ग¥यो भने हामी टुलुटुलु हेरेर बस्नेवाला छैनौं ।
विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने संसद्मा कुर्सी हानाहान हुने, बजेटका ब्यागहरु च्यातिने इतिहास पनि त छ नि । यो पटक त्यस्तो इतिहास संसद्ले दोहो¥याउने अवस्था आउँछ कि आउँदैन ?
सरकार बनेको तीन महिनाभित्रै हामी यो सरकार ढाल्छौं भन्दै हिंड्दैनौं । लामो समयसम्म संसद् चल्न नदिने, सडकमा गएर सरकार ढाल्न आन्दोलन गर्ने काम नेपाली कांग्रेसबाट हुँदैन । बजेटको ब्रिफकेसलाई च्यात्ने, कुर्सी भाँच्नेजस्ता संस्कृति पनि हामी दोहो¥याउन चाहँदैनौं । हामीलाई गर्न आवश्यक छैन । त्यसो गर्दैगर्दा तत्कालीन कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई हामीले जे ग¥यौँ त्यो ठीक ग¥यौँ । तर, नेपाली कांग्रेस ढुक्कका साथ भन्ने आँट गर्छ त्यस्तो गलत संस्कारलाई कांग्रेसले सही भन्न सक्दैन । नेपाली कांग्रेसले बडो गम्भीरतासाथ असल र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका यस्तो हुन्छ भनेर देखाउन चाहन्छ ।
कुनै समय निकै राम्रो हातेमालो गरेका दुई दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी अहिले वाम गठबन्धनको नाममा सरकारमा छन् । यी दुई दलसँगै बसेर तपाईंहरुले काम पनि गर्नुभयो । भनेपछि यी दललाई अझ रचनात्मक सल्लाह दिने अधिकार पनि त तपाईंहरुलाई होला नि ?
मुख्य गरेर उहाँहरुलाई हामी चार ओटा सुझाव दिन चाहन्छौं । यी सुझाव हामीले सार्वजनिक ठाउँ र संसद्मा पनि दिने छौँ । पहिलो कुरा भनेको उहाँहरुले संसदीय मूल्य–मान्यतालाई बुझिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो पहिलो आग्रह हुन्छ । संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहाराहरुको अधिनायकत्व प्राप्त गर्ने भनेर उहाँहरु आउनुभएको थियो । अहिले उहाँहरु संसदीय व्यवस्थालाई मूलबाटो ठानेर हिंड्नु भएको छ । यो मर्मलाई उहाँहरुले बुझ्नुहोस् मेरो पहिलो आग्रह छ ।
दोस्रो कुरा मदन भण्डारीले माक्र्सवादको सिर्जनात्मक विकास र प्रयोग गरौँ भनेर जनताको बहुदलीय व्यवस्थाको प्रतिपाद गर्नुभयो । तर, त्यो दृष्टिकोणलाई अहिले मुख्य गरेर एमालेले पटक–पटक सरकारमा पुगेपछि छाडेर भिन्न प्रकारको मार्ग अख्तियार पो गर्न लाग्यो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । त्यो आशंकालाई उहाँहरुले सच्याउनुपर्छ, दोस्रो हाम्रो सुझाव उहाँहरुलाई यो छ । तेस्रो भनेको आफूभित्रको अन्तरविरोधलाई चिरेर समृद्धिको सपना पूरा गर्न उहाँहरु सफल हुनुहोस् मेरो शुभकामना छ ।
चौथो कुरा हिजो नेपाली कांग्रेस पार्टी सरकारमा रहेको बेलामा मधेसवादी दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधान संशोधन गरौँ भन्दा राष्ट्रघात भन्ने उहाँहरु अहिले त्यही विषयलाई उठाएर संविधान शंसोधनमा जान तयार हुनुभएको छ । त्यो भनेको नेपाली कांग्रेसले हिजो चालेको कदम राष्ट्रघाती थिएन भन्ने उहाँहरुले नै पुष्टि गनुभएको छ । यो कांग्रेसका लागि पनि सकारात्मक कुरा हो ।
त्यसैले उहाँहरुले मुख्य गरेर यी चार ओटा कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुहोस् यो भयो भने नेपालको राजनीति सहि ढंगले अघि बढ्न सक्छ ।
संयोगवश विश्वप्रकाश शर्मा झापाको मतदाता नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ता र झापाकै मतदाता केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । यो देशको प्रधानमन्त्री झापाको मतदाता, नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ता पनि झापाकै मतदाता । यस्तो संयोगको अवस्थामा तपाईंले आफ्नै जिल्लाको मतदाता प्रधानमन्त्रीलाई दिने सल्लाह चाहिं के छ ?
संयोगसँगै खुशीको कुरा पनि हो । यसमा मेरो उहाँलाई बडो शतर्कतापूर्वक सहयोग गर्ने र बढो शतर्कतापूर्वक प्रतिवाद गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा छ । म उहाँलाई थोरै मात्रै स्मरण गराउन चाहन्छु । उहाँ अहिले सहज राजनीतिक वातावरणको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यसलाई उहाँले सदुपयोग गर्न सक्नुहोस् भन्ने मेरो कामना छ । गिरिजाबाबू प्रधानमन्त्री हुँदा होस् या शेरवबहादुर र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नै किन नहोस् मुलुक त्यति सहज राजनीतिक वातावरणबाट अघि बढिरहेको थिएन ।
कांग्रेस खुम्चिनुमा युवालाई जिम्मेवारी नदिएकाले पनि हो भन्ने छ नि ?
अहिले हामीले पार्टीका फरक–फरक समूहको आवाज बोल्ने होइन सबैको आवाज बोल्नुपर्छ । अब हामी सबैले नेपाली कांग्रेसलाई रुपान्तरण गरौँ, राम्रो बनाऔँ भनेर लाग्नुको अर्को विकल्प छैन । ठाउँ–ठाउँमा फुलहरु फुलेका छन् । यी सबै फुललाई एउटै मालामा गाँसेर जानुको अर्को विकल्प छैन । फुलहरु आफैँ माला बन्दैनन् । माला बनाउनका लागि धागो चाहिँन्छ । धागो आफैँमा बास्ना होइन तर धागो विना मालाको कुनै पूर्णता पनि हुँदैन । त्यसैले हामी सबै यही कुरा मनन् गरेर लागौँ नेतृत्वलाई पनि यही सुझाव छ ।